Kenya oo sheegtay iney 600 oo qof u xirxireen qaraxii habeeno ka hor ka dhacay Magaalada Nairobi
Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ka socday howlgalo ay wadaan ciidamada Booliska Kenya kadib qarax lagu hoobtay oo lagu weeraray masaajid ku yaala xaafadaasi ayaa waxaa howlgalkaas faahfaahin ka bixiyey masuuliyinta dalkaas.
Duqa magaalada Nairobi oo shir jaraaid u qabtay saxaafada ayaa sheegay in howlgalo isdaba joog ah oo Boolisku sameeyeen maalmihii ugu dambeeyey lagu soo xirxiray dad kor u dhaafaya ilaa 600 oo qof oo Soomaali u badan.
"Waxay iskugu jiraan dadkaan la soo qabqabtay kuwo lagu tuhunsan yahay qaraxii ugu dambeeyey ee xaafada Islii ka dhacay iyo qaar kale oo heysta kaarka qaxootinimnada oo aan dooneyn inaan xeryaha dib ugu celino, baaritaano ayaana ku socda" ayuu yiri duqa magaalada Nairobi.
Duqa magaalada Nairobi waxa uu sheegay in ciidamo dheeraad ah oo Booliska ka tirsan laga howlgeliyey magaalada Nairobi si ay u xoojiyaan ammaanka, islamarkaana wax uga qabtaan kooxaha qaraxyada geysanaya.
Saddex habeen ka hor ayey aheyd markii Bam gacmeed lagu weeraray dad ka soo baxay masaajidka Al-hidaaya ee magaalada Nairobi, waxaana ku naf waayey illaa shan ruux halka in ka badan 10 kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasoo uu ku jiray xildhibaan Yuusuf Xasan oo ku jira baarlamanka Kenya.
xuurshe114@hotmail.com- xuurshe20@hotmail.com-xuurshe114@gmail.com www.somaliweyn.com Naga soo wac halkan (Skype)